Amabhange Esithombe: Izindawo Ezihle Kakhulu Nezamahhala Zango-2019 Kusuka kuLinux
Amabhange ezithombe aku-inthanethi ayindawo yokugcina izimpahla, isitolo sezincwadi, inqolobane yamaqoqo ezithombe, imidwebo, imidwebo, okungukuthi, izithombe, ngokuvamile. Lezi zivame ukusebenza njengefayela eliyisethenjwa noma indawo yokuqala imisebenzi eminingi, ngoba okwamanje futhi ngokomthetho, zinikeza ithuba lokushicilela, ukubonisana nokulanda, ngokukhululekile noma ngemali ethile, izigidi zezithombe zabasebenzisi bomhlaba wonke.
Ukusetshenziswa kwabo okuyinhloko noma inhloso ukuthi bangasetshenziswa njengabahlinzeki bezithombe eziyizithenjwa ukulungiselela ukuhlelwa kokuqukethwe kanye nemultimedia., online or not, whether in digital media such as websites and blog, as also in print media such as Magazines, newspapers, among other media or formats.
Iningi lamabhange ezithombe anamuhla liyathenga noma lithole futhi lisingethe ngokukhululeka noma ngezimo, izithombe zabanikazi noma zabadali (umthwebuli zithombe, umculi, iqembu). Futhi-ke, kule nqubo, bathola wonke noma ingxenye yamalungelo okuzala nokusetshenziswa kwesithombe esithile. Ukuze kamuva ube nazo ngokukhululeka, ngemikhawulo noma ngenkokhelo, yezivakashi zakho, abasebenzisi noma amalungu.
1 Ama-Image Banks amahle kakhulu we-2019
1.1 Amabhange wesithombe amahle kakhulu namahhala
1.3 Ukusesha kweCC
1.5 Izithombe Zesizinda Somphakathi
1.7 Izithombe Zamahhala Zesitoko
1.8 Izithombe zamahhala
1.10 Izithombe zobumnandi
1.12 Amanye amabhange ezithombe awusizo futhi aziwayo
1.13 Abatholi bezithombe
Ama-Image Banks amahle kakhulu we-2019
Amabhange wesithombe amahle kakhulu namahhala
Namuhla, kunamabhange amaningi wesithombe onlineAbanye bebenesikhathi eside bemakethe, abanye bakamuva. Ezinye zivela kuphela esigabeni esisodwa sesithombe, ezinye zinezigaba ezimbalwa noma eziningi ezitholakalayo. Ezinye ziyizithombe zamahhala nezamahhala kuphela, kanti ezinye zinikela ngezithombe ngenkokhelo kuphela, ezinye zinezindlela zombili zokuziphatha.
Nalu uhlu oluhle lwamabhange ezithombe zamahhala namahhala:
burst Kuyisayithi ngesiNgisi nangesiPutukezi. Sesha izithombe usebenzisa amaphethini wamagama. Letha amaqembu ambalwa ezithombe noma ukuhlukaniswa nge "Izigaba Ezidumile" kanye "Namaqoqo". Akudingi ukubhaliswa ukusebenzisa le nsizakalo, futhi zonke izithombe zayo ezenzelwe ukusetshenziswa ngumphakathi futhi mahhala. Kuyisayithi elenziwe ngabathwebuli bezithombe abangu-2 baseCanada, elinikeza isayithi eligcwele izithombe zekhwalithi ephezulu ezivela kubathwebuli bezithombe abahlukahlukene emhlabeni jikelele.
Ukusesha kweCC Kuyisayithi lolimi lwesiNgisi kuphela. Sesha izithombe usebenzisa amaphethini wamagama. Ayilethi amaqembu ezithombe noma wezigaba kepha inesihlungi sosesho esifaka phakathi "uhlobo lwelayisense", "isayithi lendabuko" kanye "nomdali". Akudingi ukubhaliswa ukusebenzisa le nsizakalo, futhi zonke izithombe zayo ezenzelwe ukusetshenziswa ngumphakathi futhi mahhala. Kuyisayithi elenziwe yinhlangano yeCreative Commons ezinze e-USA. Ibuye isebenze isikhombimsebenzisi esidala namanje.
I-Foter Kuyisayithi lolimi lwesiNgisi kuphela. Sesha izithombe usebenzisa amaphethini wamagama. Kuletha amaqembu ambalwa ezithombe noma ukuhlukaniswa nge «Izigaba» Akudingi ukubhaliswa ukusebenzisa le nsizakalo, futhi zonke izithombe zayo ezenzelwe ukusetshenziswa ngumphakathi futhi mahhala. Kuyisayithi elizinze e-USA, elinikeza isayithi eligcwele izithombe zekhwalithi enhle ezinqumweni ezi-3 ezihlelwe ngaphambilini.
Izithombe Zesizinda Somphakathi
Izithombe Zesizinda Somphakathi isayithi lezilimi eziningi elibandakanya iSpanishi. Sesha izithombe usebenzisa amaphethini wamagama. Kuletha amaqembu amaningi ezithombe noma ukuhlukaniswa nge- «Izigaba» noma «Izigaba». Akudingi ukubhaliswa ukusebenzisa le nsizakalo, futhi zonke izithombe zayo ezenzelwe ukusetshenziswa ngumphakathi futhi mahhala. Kuyisayithi elizinze eNgilandi, elinikela ngezithombe ezahlukahlukene zamahhala zekhwalithi enhle nasezinqumweni ezingcono zokukhokha.
PngImg Kuyisayithi lolimi lwesiNgisi kuphela. Sesha izithombe usebenzisa amaphethini wamagama. Kuletha amaqembu amaningi ezithombe noma ukuhlukaniswa nge- «Izigaba» kanye «Nezigaba». Akudingi ukubhaliswa ukusebenzisa le nsizakalo, futhi zonke izithombe zayo ezenzelwe ukusetshenziswa ngumphakathi futhi mahhala. Kuyisiza esinikela ngezithombe ezahlukahlukene zamahhala neziqeshana zekhwalithi enhle kepha kufomethi ye-.png, ikakhulukazi ekwakhiweni kwewebhu nokwakhiwa kukonke.
Izithombe Zamahhala Zesitoko
Izithombe Zamahhala Zesitoko Kuyisayithi lezilimi eziningi elingafaki iSpanishi. Akuvumeli ukuthi useshe izithombe usebenzisa amaphethini wamagama. Letha inani elihle lamaqembu ezithombe noma ukuhlukaniswa nge «Izigaba». Akudingi ukubhaliswa ukusebenzisa le nsizakalo, futhi zonke izithombe zayo ezenzelwe ukusetshenziswa ngumphakathi futhi mahhala. Kuyisayithi elizinze eRussia, elinikela ngezithombe ezahlukahlukene zamahhala zekhwalithi ephezulu kakhulu futhi nesinqumo esihle kakhulu.
Izithombe zamahhala isayithi lezilimi eziningi elibandakanya iSpanishi. Sesha izithombe usebenzisa amaphethini wamagama. Kuletha inani elihle lamaqembu ezithombe noma ukuhlukaniswa nge «Izigaba» kanye «Nezigaba». Akudingi ukubhaliswa ukusebenzisa le nsizakalo, futhi zonke izithombe zayo ezenzelwe ukusetshenziswa ngumphakathi futhi mahhala. Kuyisayithi elizinze e-USA, elinikela ngezithombe ezahlukahlukene zamahhala zekhwalithi enhle kakhulu nasezinqumweni ezi-5 ezichazwe ngaphambilini ezahlukahlukene.
I-Freepik Kuyisayithi ngeSpanishi. Sesha izithombe, amavektha, izithombe zesitoko, amafayela we-PSD nama-Icons usebenzisa amaphethini wamagama. Kuletha inani elihle lamaqembu ezithombe noma ukuhlukaniswa nge- «Izigaba» no «Usesho oludumile». Akudingi ukubhaliswa ukusebenzisa le nsizakalo, futhi izithombe zayo zombili zisetshenziswa mahhala futhi zisetshenziswa umphakathi futhi zikhokhelwa insizakalo ye-premium. Kuyisayithi elizinze e-US, elinikezela ngokuhlukahluka okuningi ngekhwalithi enhle kakhulu.
Izithombe zobumnandi Kuyisayithi ngeSpanishi. Sesha izithombe usebenzisa amaphethini wamagama. Kuletha inani elincane lamaqembu ezithombe noma ukuhlukaniswa nge «Izigaba». Akudingi ukubhaliswa ukusebenzisa le nsizakalo, futhi izithombe zayo zombili zisetshenziswa mahhala futhi zisetshenziswa umphakathi futhi zikhokhelwa insizakalo ye-premium. Kuyisayithi elizinze e-US, okwamanje elinganikeli ngezinhlobonhlobo eziningi futhi izithombe ezitholakala kuphela ziza ngesinqumo esichazwe ngaphambilini.
Ama-Kaboopics Kuyisayithi ngesiNgisi. Sesha izithombe usebenzisa amaphethini wamagama. Iletha inani elihle lamaqembu ezithombe noma ukuhlukaniswa ngezigaba ngo- "Izigaba" futhi inokuhlunga nge- "Izigaba". Awudingi ukubhaliswa ukusebenzisa le nsizakalo, futhi izithombe zakho zombili zisetshenziswa mahhala futhi zisetshenziswa umphakathi. Kuyisayithi elizinze e-US, okwamanje elikuvumela kuphela ukuthi ulande izithombe ezitholakala ezinqumweni ezichazwe ngaphambilini ezi-2 nokukodwa okwenziwe ngokwezifiso.
Amanye amabhange ezithombe awusizo futhi aziwayo
Nalu uhlu olwengeziwe lwamanye amasayithi we-Image Bank athakazelisa ukusesha, ukuvakashela nokuhlola:
Izithombe Zamahhala Zokudla
Kunezindawo ezingewona ama-Image Banks kahle kepha zingabahloli bezithombe abatholakala kuma-Image Banks. Phakathi kwazo kukhona:
Amabhange ezithombe ngokungangabazeki asinikeza izinzuzo ezinkulu, ikakhulukazi kulabo abadinga ubuchwepheshe kumaphrojekthi wethu, izindatshana noma okuqukethwe kwe-multimedia ukusebenzisa izithombe, mahhala futhi mahhala noma ngokungakhokhi.
Njengoba noma ngabe sithuthukisa noma sihlela ini, isidingo sansuku zonke sezithombe ezintsha senza lawa masayithi abe ngumthombo ofanelekile wokuthola okokusebenza okuhlobene nesihloko sethu., futhi ngenzuzo eyengeziwe ukuthi eziningi zalezi, yize zikhululekile futhi zikhululekile, zisezingeni eliphakeme futhi zenziwe ngochwepheshe, okusivumela ukuthi simangaze abafundi bethu, abathengi noma abasebenzisi ngokuqukethwe kwethu nemikhiqizo eyenziwe ngabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Amabhange Esithombe: Izindawo ezingcono kakhulu zamahhala nezamahhala zango-2019
U-Alex Polo kusho
Kuhle kakhulu ngiyabonga kakhulu! Ngisebenza futhi nevidiyo futhi ngithole le sayithi ebengiyithanda ngokuphelele, ibizwa nge-https: //Gifing.com, inokuqukethwe okuhlukile nabalingisi nokuma okuqondile kwamanethiwekhi omphakathi ngiyisebenzise kakhulu, ngethemba ukuthi izokusebenzisa ngikukhonze 🙂
Phendula u-Alex Polo
Ngiyabingelela Alex! Siyabonga ngokuphawula kwakho. Amabhange evidiyo awaziwa kakhulu, ngakho umnikelo omuhle kakhulu.
IROSA Enterprise Desktop X4 ifika neKernel 4.15, KDE4 nokuningi